Trump oo ka xir-xiranaya Aqalka Cad - Tilmaan Media
Wararka laga helayo Aqalka Cad ayaa sheegaya in ay billaabatay raridda alaabta uu leeyahay Donunld Trum, sidoo kale waxaa bilaabatay raridda agabka qoyskiisa iyo gacanyare yaashiisa. Raridda agabka ayaa bilaabatay kadib markuu Kongressku ansixiyay guusha Joe Biden.Waxaa haatan socotta dadaalada qabashada xafladda caleemo saarka madaxwaynaha cusub.
Aqalka Cad ayaa loo diyaarinayaa madaxdwaynaha cusub, qoyskiisa iyo gacanyare yaashiisa la shaqayn doona oo lagu wado in la caleemo saaro 20 ka bishaan Janaayo. Sida ay sheegtay wakaaladda Bloomberg, Trump ayaa qorshaynaya in uu maalinta caleema saarka Joe Biden uu u baqooli doono goobta nasasho ee uu kuleeyahay gobolka Florida. Boomberg ayaa intaas raacisay in laga yaabo in qaar kamid ah gacanyare yaasha Trump ay la sii shaqayn doonaan markuu xilka katago kadib.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka ayaa madaxwaynaha cusub ku war galiyay in uu habaynka ka horaysa xafladda caleema saarkiisa ku nagaado aqalka Blair House oo ah aqal taariikhi ah oo ku dhaw Aqalka Cad. Arrintaan ayaa ah dhaqan soo jireen ah.
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo ku eedeeyay mucaaradka iyo D/goboleedyada qaarkood inaysan rabin in dalka doorasho kadhacdo